Ny fametahana volo amin'ny lehilahy - Fantatrao ve ny fanaovana azy? | Bezzia
Ahoana ny fikolokoloana volo amin'ny lehilahy
Susana godoy | 06/09/2021 10:00 | beauty
Te-hampideradera taovolo ankehitriny miaraka amin'ny volo miverina amin'ny lehilahy ve ianao? Na dia fahita amin'ny vehivavy aza ny mahita ny fomba hametrahana ny vokany lena, amin'ity tranga ity dia mifantoka amin'ny volo fohy kokoa isika, na dia somary kely aza ny volony. Izy io dia iray amin'ireo taovolo tianao indrindra isan'andro na amin'ny fotoana manokana indrindra.
Azo tratrarina foana izany, na dia tsy maintsy manaraka dingana iray aza isika hahazoana ny vokatra tsara indrindra. Satria indraindray dia ataontsika adalana kely izany ary ho hitantsika rehefa tara. Manana volo mahitsy ve ianao? Izay rehetra ilainao dia holazainay eto ambany.
1 Ahoana ny fikolokoloana volo amin'ny lehilahy
2 Tsikelikely hahazoana ny taovolo taovolo tonga lafatra
3 Volo mikotroka: Ahoana ny fomba fanaingoana ny volo amin'ny lehilahy
4 Inona no hatao raha lava be ny volo
Sasao ary sasao tsara amin'ny servieta. Izany hoe, tsy maintsy esorintsika rano araka izay tratra, mba hijanona mando kokoa ny volontsika, alohan'ny hanatanterahantsika ny taovolo.
Ny tsara indrindra dia ny hoe tokony hadio tsara ny volo. Indraindray adinontsika fa mbola misy sisa tavela amin'ny vokatra hafa na andro hafa io. Tsia, tsy maintsy manomboka hatrany am-boalohany isika mba hahitana vokatra tsara kokoa.
Misafidiana savoka, pomade na fixative, fa na izany na tsy izany dia aza manararaotra ny vokatra nofidina. Satria amin'ny vola kely dia hanana mihoatra ny ampy ianao ary indraindray io lesoka io no mahatonga antsika hilavo lefona amin'ny vokatra tsara.
Raha manana nify borosy malalaka ianao dia aleony alohan'ny hampiasana ny tohotra mahazatra. Ho fanampin'ny fanakorontanana dia manampy anao koa hamita ny taovolo haingana kokoa miaraka amin'ny vokatra tsara kokoa.
Atsaharo hatrany mankany amin'ny lafiny voajanahary. Satria raha manandrana manova ny fisarahana amin'ny minitra farany ianao dia fantatrao fa mandritra ny tontolo andro dia hiverina amin'ny volony ny volonao.
Tsikelikely hahazoana ny taovolo taovolo tonga lafatra
Tsy maintsy mando ny volo ary tonga ny fotoana hikororohana azy tsara. Aza adino ny mamaha ny sisiny aloha ary avy eo mankeny amin'ny faka.
Safidio ny vokatra: Ny pomade dia mety tsara amin'ny volo maina, maivana ary tsy milanja. Mitovy amin'ny savoka izy io fa tsy manampy famirapiratany matetika.
Apetaho manerana ny volo izay hohaingoinao fa avelao ny fakany raha tsy misy azy.
Andraso minitra vitsy vao manomboka miasa ny vokatra.
Fotoana izao zarao tsara ny vokatra manerana ny volo Ary raha hitanao fa mifikitra ny tananao dia afaka mandena azy ianao kely, fa kely fotsiny.
ankehitriny tsy maintsy mandalo ny sisiny ianao hamolavolana azy amin'ny taovolo farany.
Rehefa efa nesorinao io dia tsara kokoa raha mikasika azy kely araka izay azo atao ianao, mba hisorohana azy tsy hiraraka.
Farano amin'ny tsiranoka misy azy dia vita ianao.
Volo mikotroka: Ahoana ny fomba fanaingoana ny volo amin'ny lehilahy
Manana volo mikotrana ve ianao ary te-hikopy azy io? Avy eo angamba hanasarotra anao kely izany. Ny tokony hataonao dia ny manasa azy ary mampihatra «conditioner» satria hamela azy malefaka kokoa izany. Noho izany, aorian'io dingana io dia tokony hokosehinao hiverina izy io, esorina arak'izay azo atao ny rano. Ataovy maina amin'ny hairdryer, fa mamolavola azy hatrany ary manosotra diloilo mahery. Mazava ho azy fa tsy maintsy mandeha mikorisa ianao mandra-pilaminany. Noho izany, eo anelanelan'ny vokatra matanjaka sy ny fanampian'ny fanamainana, hahatratraranao azy. Halaviro hatrany ny borosy ary raha manana volo maina be ianao, dia tsara kokoa ny manosotra sarontava alohan'ny hanombohana manao an'io karazana taovolo io.
Inona no hatao raha lava be ny volo
Manana ny teknika izahay fa raha amin'ny lafiny iray dia mila manonona volo wavy izahay, amin'ny lafiny iray hafa, volo lava kokoa. Noho io antony io, raha izany dia hanaraka ny dingana rehetra hatao ianao nefa hitadidy zavatra manan-danja ao an-tsaina. Ny fampifangaroana ny volo amin'ny lehilahy amin'ny volo lava dia mitaky vokatra fanamboarana tsy dia matanjaka. Satria raha lava sy malama izy dia hifanaraka kely noho ny lanjany.. Raha hitanao fa tsy izany dia mandehana amin'ny fametahana mafy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ahoana ny fikolokoloana volo amin'ny lehilahy
Sakafo 6 toa salama, nefa tsia
Taovolo volo amin'ny ambaratonga faharoa: haingana sy mora